#Knowledge #သတငျးစုံ2020 #သတငျးမြား #MyanmarNews
သုတ ရသဆိုင်ရာ ဗီဒီယိုများ၊ အားကစားသတင်းများ နှင့် အနုပညာရှင်များရဲ့ သတင်းများကို နေ့စဉ် တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Myanmar News Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီး အားပေးခဲ့ပါအုံးခင်ဗျာ။
ကြည့်ရူအားပေးမှူအတွက် ပရိသတ်များအားလုံး ကို ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဌေးအောင် လက်စသပ်တော့ nld နဲ့ ပေါ်င်းစားလို့ မရလို့ ဖွှနေတာပါလား လူမျိုးကောင်း သူတောင်စား
Author — Thein Win
အခုလို ပြောပြတဲ့ ညီလေး ကို thank you ပါကွာ
ဦးဌေး အောငျ ပေးတဲ့ လကျဆောငျ တကျ တနျဘိုး အမြား ကွီး တဲ့ လကျဆောငျ ပေး ဒါတောငျ အမစေု မယူ ဘူး
Author — Khinthat Zin
တောက်! ခွေးသား ဌေးအောင် ဆိတ်ဂွေးဆိ ဒါကြောင့် ခွေးသား ခွေစကားပြောသွားတာကို NLD ကို လာတ်ထိုးလို့မရလို့ကိုး ခွေးသား အာဏာရှင် ဖွှတ် ကျွန်ခွေး
အမုနျတရာတှေး ဖယျကွပါ အပွဈမမွငျ့ကွပါနဲ့
အဖွူနဲ့အမဲ အတူးတူး ပါပဲ ဦခေါငျနဲ့အမှီး အမှီးနဲဦခေါငျးအတူးတူပါပဲ အဖနေဲ့အမေ အတူးတူပဲ
နငျ့တိုအကုနျလုံး ငါလကျထဲ ရခှေကျတှေ မိခှကျတှကွေီးပဲ အခြိနျနဲဒီရဟော လူကိုမစောငျဘူး
သူ့၏စားချိန်ကုန်သွားပြီဟုသတ်မှတ်ပါ။အစိုးရမှချ ပေးသောအခွင့်အ ရေးယူပြီးရင်တိုင်းပြည်အတွက်အခွန်
ပေးဆောင်ရမည်။တိုင်းပြည်အတွင့်အ ရေးပေးရမည်။
ခရိုနီများတွင်max ဇော် ဇော် ၏ လုပ်ဆောင်ချက်သာပြည်သူတွေတွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။
Author — Khin Kyaw
If this post is true, it could be remarked that
the descendant trash folks from all prior past govenors garbage of non-democratic policy, are still manipulating and disturbing Myanmar country future in several different means to let self country be away from going on to the better fluorescent true democratic future one.
Author — Inner Peace
I will be there when I'm kids
I will be soon maybe next year
Author — Chochohtwe Chocho
It is true and promise, you are excellent.Ko Ko Lay from Australia.
Author — Ko Ko Lay
Hello Good MyBest House koko General Manager Fêtå Man You Ok
Author — Best Resort
ပထမအချီမှာ ‌ဌေးအောင် ကို ချာတိတ်က အလဲအကွဲထိုးထားပါတယ်။ ဌေးအောင်က ၂မိနစ် အနားတောင်းထားပါတယ်။
Author — shan gyi
​ပွောသငျ့​ပွောထိုကျတာတှေ အခွအေနေ ပျေါမှာ သုံးသပျကွညျ့ပွောပါ။
Author — Lwin Mar
Yeah I felt it would help you later that the ABV of wnd needing that
Author — Pop K
အား ပေး ပါ တယျ အ မ် နျ ပွော တဲ အ တှကျပွညျသူ တှေ သိ ရ လို ပါ ကြေး ဇူး
တငျ ပါ တယျဗ ဟု သု တရ တာ တှေတငျ
Author — Win Win
ဦးဌေးအောင်မဟုတ်ဘူးထင်တယ် ဦးဌေးဟောင်ပါ ဟောင်တာဘက်ရတာကို
Author — Phyo phyo
ဆိတ်ဂွေးစီ့ ဆိုတာ ဟိုပေါင်ကပ် ဒီပေါင်ကပ်နဲ့ ဌေးအောင် ဆတ်ဂွေးစီ့
Author — Daewin Nan
tks for yr information.try to give more right facts n figs.
Author — Hla Soe
စ သုံး လုံး က လား သိ နေလိုက် တာ ... သား လေး ဘေး ရန် အ ပေါင်း က ကင်း ဝေး ပါ စေ... သိတာ တွေ အကုန် ပြော တာ အား လုံးက စဉ်း စား ဆင် ခြင် လို့ ရ ပေ မယ့်... သား အတွက် အန္တရာယ် များ ပါတယ် ...
Author — may chit
ဖြူဖြူထွေးအပေါ် အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းကလူတွေရဲ့ အမြင်ပြောင်းလာကြပြီ။
မအားပဲယားနတေဲ့ ဒျေါယမငျးမွငျ့ဆှနေဲ့ ပွညျခိုငျးဖွိုးသို့မှာတမျး ဆိုပွီး ဒဲ့တှကွေီးဖွဲသှားတဲ့ညီငယျ...
အမိုကျစား (ဟာသ)- ကြျောရဲအောငျ၊ စိုးမွတျသူဇာ၊ ဇှဲနိုငျဝငျး၊ မွတျကသေီအောငျ၊ နလေငျး
မြန်မာပြည်လွတ်တော်ထဲမှာ ပွဲကြမ်းနေတဲ့ ဝန်ကြီးနဲ့ လွတ်တော်အမတ်ဗီဒီယိုဖိုင်
ပရိတျကွီး ၁၁သုတျ ပါဠိ အနကျ သီတဂူဆရာတျော
အစိုးရဝှက်ဖဲတွေ လှန်ချပြနေတဲ့ ဦးဌေးအောင်ကို လုံးဝအရေးမယူရဲရခြင်း အကြောင်းရင်းအသံဖိုင်ဗျာ...
သြှငျဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ကြောကျကှငျးအရေးတျောပုံ ဗုဒ်ဓဘာသာ နှငျ့ ခရဈယာနျဘာသာ အရေးတျော‌ပုံ အကွောငျး...
ဗုဒ်ဓဘာသာကို ခဈြမွတျနိုးသူတိုငျး ကွညျ့ခှငျ့ရကွပါစေ
မွနျမာဇာတျကား | တျောတျောတျောတဲ့တို့တှံတေးတာတီး
မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ဒုက္ခရောက်နိုင်မယ့် ငွေလိမ်နည်းအသစ်ထွက်ပေါ်နေ။